Kenya oo ka hadashay arrin ku soo cusboonaatay xiriirkeeda Soomaaliya
Home » WARARKA MAANTA » Kenya oo ka hadashay arrin ku soo cusboonaatay xiriirkeeda Soomaaliya	Kenya oo ka hadashay arrin ku soo cusboonaatay xiriirkeeda Soomaaliya
19/03/2017	979 Views Dowladda Kenya ayaa waxa ay ka hadashay qalqal la sheegay in uu soo foodsaray xiriirka diblumaasiyadeed ee kala dhexeeya Soomaaliya, ka gadaal markii booqasho aan la sii shaacin uu madaxweynaha Kenya ugu tegay ciidamadiisa ka howlgala Soomaaliya.
Af-hayeen u hadlay dowladda Kenya ayaa mar uu maanta warbaahinta kula hadlayay Nairobi waxa uu sheegay in booqashadii uu madaxweynaha Kenya ku tegay deegaanka Dhoobley ee dalka Soomaaliya ay ahayd mid muhiim u ah dardargelinta howlgallada ay ciidamada Kenya ka wadaan Soomaaliya.
Af-hayeenka ayaa intaas ku daray in aanay dhankoodu illaa iyo hadda ka war-hayn wax dhibaato ah oo ay booqashadasi u geystay xiriirka labada dal, isaga oo intaas raaciyay in haddii ay dhibaato noocaas ah timmaadana lagu xalin doono qaab diblumaasiyadeed.
Tan iyo markii uu madaxweynaha Kenya mudane- Uhuru Kenyata si lama-filaan ah u soo gaaray deegaanka Dhoobley, waxaa soo baxayay warar sheegaya in madaxtooyada Soomaaliya ay aad uga carootay booqashadaas oo ahayd mid aan laga warqabin.
Arrintan ayaa waxa ay imaanaysaa xilli la filayo in uu madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhawaan booqasho ku tego Kenya, halkaas oo noqonaysa dalkii ugu horreysa ee gobalka ah oo uu madaxweynuhu booqdo doorashadiisa ka dib.
Previous: FIIRSO Sawiro: Danjire Ameeriko oo arrin lagu farxo ka sameeyey tuulo hoos tagta Balcad
Next: Buntilan oo soo bandhigtay guul muhiima oo ay gaartay (Fiirso)